ဝေါဟာရကြွယ်လိုသော် – ဆရာမျိုးကျော်မြင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ဝေါဟာရကြွယ်လိုသော် – ဆရာမျိုးကျော်မြင့်
ဝေါဟာရကြွယ်လိုသော် – ဆရာမျိုးကျော်မြင့်
Posted by kai on Sep 11, 2014 in Contributor, Columnist, Education, Literature/Books | 8 comments
အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရမကြွယ်ဝ၍ မိမိပြောလိုသည့်စကားလေးများကို ရင်ထဲ၌ပင်သိမ်းဆည်းထားလိုက်ရသည့် အတွေ့အကြုံမျိုး ကြုံဖူးကြသူများရှိပါလိမ့်မည်။ ဘယ်ဘာသာစကားကို သင်ယူရာ၍မဆို ဝေါဟာရများများစားစားမသိသူများအနေနှင့် စကားပြောရာ၌လည်းကောင်း၊ စာရေးရာ၌လည်းကောင်း အခက်အခဲများတွေ့ရသည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝေါဟာရကြွယ်ဝလာအောင် Dictionary တအုပ်လုံးကို အလွတ်ကျက်မှတ်ရမှာလားဟု မေးစရာဖြစ်လာပါသည်။ စင်စစ်မလိုအပ်လှပါ။ တကယ်တော့ ဝေါဟာရကြွယ်ဝလာအောင် လုပ်သင့်သည့် လုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းကောင်းများ ရှိပါသည်။ ဝေါဟာရအသစ်များကို လေ့လာကျက်မှတ်သည့် နည်းလမ်းကို ခေတ္တခဏ မေ့ထားပြီး မိမိနှင့်ရင်းနှီးပြီးသား၊ တနည်းအားဖြင့် မိမိနှင့်အကျွမ်းတ၀င်ရှိပြီးသား စကားလုံးလေးများကို တိတိကျကျ၊ ထိထိမိမိ၊ လှလှပပသုံးစွဲတတ်အောင်ကြိုးစားကြရအောင်။ ဤနည်းကပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ တတ်ရန်လည်းပို၍မြန်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့် Look ဟူသောစကားလုံးလေးကို ကြည့်ကြရအောင်။ အင်္ဂလိပ်စာကို အနည်းအပါးလေ့လာထားသူတိုင်းအတွက် ရင်းနှီးပြီးသား စကားလုံးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
” ဒါလေးများသိတာပေါ့” ဟု၊ ” ဒါလောက်တော့ သုံးတတ်တာပေါ့ ” ဟု ထင်ကြပေလိမ့်မည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ၀ါကျ၃ခုကို ကြည့်လိုက်ပါဦး။
1. He wants to look forajob.
2. He looks very weak.
3. Looks can be deceptive.
ပထမ၀ါကျမှာ Look ဟာ ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ အများသိပြီးသားအဓိပ္ပာယ်နဲ့မတူဘဲ၊ အလုပ်ရှာတဲ့သဘောကို ဆောင်တယ်။ (အလုပ်ရှာဖွေတာပါ။)
ဒုတိယ၀ါကျမှာ Look ဟာ ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ လုံးဝမတူဘဲ၊ အခြားသူများရဲ့အမြင်မှာ ဆိုတဲ့သဘောကို ဆောင်တယ်။
တတိယ၀ါကျမှာတော့ Look ဟာ ကြိယာမဟုတ်ဘဲ ကတ္တားဖြစ်နေတယ်။
မိမိနှင့်ကျွမ်းဝင်ပြီးသား Look ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးမှာ လေ့လာစရာ၊ မှတ်သားစရာတွေ လိုနေသေးတယ်ဆိုတာကို သဘောမပေါက်သေးရင်တော့ Look မှာ Preposition လေးတွေ ကပ်ပေးလိုက်ရအောင်။
2. Look up to
3. Look down on
စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာက ” Look up the meaning of this word ” လို့ဆိုရင် စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ခေါင်မိုးပေါ်မှာ၊ မျက်နှာကျက်ပေါ်မှာ မကြည့်ကြပါနဲ့။ စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို အဘိဓာန်မှာ ရှာပါလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ” Look up “
ကို နောက်တမျိုးသုံးကြပါသေးတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်သွားတဲ့အခါ US ရှိ မိမိရဲ့လိပ်စာကိုပေးရင်း ” Look me up when you get to LA ” ဟု ကြွားကြွားဝါ၀ါပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ တကယ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့ ပုန်းနေရုံပေါ့။ ဖုံးပိတ်ထားလိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
” Look up” နောက်မှာ ” to” လေးတလုံးထည့်လိုက်တော့ အဓိပ္ပာယ်လုံးဝပြောင်းလဲသွား ပါတယ်။ ” I always look up to my parents” ဆိုတဲ့ဝါကျမှာ ” Look up to” ဆိုတာ လေးစားတဲ့သဘော၊ အထင်ကြီးတဲ့သဘောကို ဆောင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သည်များအတွက် အထူးမှတ်သားသင့်တဲ့ဝေါဟာရလေးပါ။ ” One should always look up to one’s spouse “
တမျိုးအကောက်လွဲပြီး ကိုယ့်ထက်အရပ်ရှည်သူကိုသာရှာပြီး မယူမိရန် သတိထားပါဦး။
” Look down on” ဆိုတာကတော့ အထင်အမြင်သေးခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ အလုပ်၌လည်းကောင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲ၌လည်းကောင်း၊ ဈေးဝယ်သွားသည့်အခါ၌လည်း
ကောင်းမချေမငံဆက်ဆံတတ်သူများနှင့်တွေ့ရင် ဤတခွန်းထဲနှင့်ပြန်လည်ချေပနိုင်ပါတယ်။ ” Don’t look down on me just because I’m different”.
ကျောင်းသားတယောက်၏ ကိုယ်တွေ့အရ ” Look into” ဆိုသည့်ဝေါဟာရလေးဟာ အလုပ်မှာ နာမည်ကောင်းရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထိုကျောင်းသားလေးရဲ့ အလုပ်ခွင်မှာပြဿနာတခုပေါ်ပေါက်ရာ အထက်မှ Manage လုပ်သူက အလုပ်သမားအားလုံးကို ” What do you know about this ? ” ဟုမေးပါသည်။ အားလုံးလိုလို ” I don’t know anything “ဟု ပြောကြားကြသော်လည်း ထိုကျောင်းသားသည် Look နှင့်ပတ်သက်သည့် Phrasal Verb လေးများကို သင်ယူပြီးကာစဖြစ်တဲ့အတွက် ” I will look into the matter and report to you ASAP “ဟုပြောကြားလိုက်ရာ လွန်စွာသဘောကျသွားကြောင်း ပြောပြဘူုးပါတယ်။
နောက်ဆုံးဝေါဟာရလေး ” Look out” ကမူ အသက်ကိုပင်ကယ်နိုင်တဲ့ဝေါဟာရ
လေးဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ” Be careful ” ၊ မြန်မာလို ” သတိထား” လို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီး ” Look out” ဟုဆိုလျှင်ခေါင်းငုံ့ပြီးသား၊ သတိရှိပြီးသားဖြစ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ သတိလက်မဲ့နေခဲ့လျှင်တော့ အနည်းဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရနိုင်ပြီး၊ အဆိုးဆုံးအသက်အန္တရာယ်ကိုပင် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီတပတ်အတွက်တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နားကြရအောင်။ လေ့လာလိုသူများအနေနှင့်ကတော့ ” Take ” ” Get” စတဲ့လွယ်ကူသိလွယ်တဲ့စကားလုံးလေးများကို Proposition လေးများကပ်လိုက်တဲ့အခါ ထူးထူးခြားခြားပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကို
Dictionary အားကိုးပြီး လေ့လာမှတ်သားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ မြန်မာ့ဂဇက် စက်တင်ဘာထုတ်တွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်သည်။
ဘာမှ ဟုတ်ဘူး.. ကိုယ် အင်္ဂလိပ်စာတွေ တင်တာကို အားကျပြီးတင်တာ… ဟီး…
ဟုတ်ပါ့.. ကိုရင်တင်တော့မှ.. သတိရပြီးဆက်တင်တာ…။
တလက်စထဲ.. ဂဇက်သတင်းစာအတွက်.. သတင်းတို၁ပုဒ် ၁ဒေါ်လာနဲ့… မြန်မာဘာသာပြန်အလိုရှိသည်.. ဆိုမှ.. ဆိုပါမှ..
သဂျီး ဈေးနည်းနည်း တိုးလာပြီပေါ့
ဘာတွေ ပြန်ရမှာလဲ… ပြောပြလေ… စာမူပို့လိုက်… ပြန်ရမယ့်ဟာကို… ကောင်းမကောင်းကို ကြည့်ပြီး ရွေးပေါ့… စမ်းကြည့်မယ်လေ.. ဒါတော့ လုပ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်… ဖုန်းကိစကတော့ မလွယ်ဘူး.. ကော်မကောင်းတာနဲ့ မအားတာနဲ့… ဘာသာပြန်တာက အိမ်မှာဆိုတော့ နားတဲ့အချိန် ၀ါသနာပါတာ လုပ်တာဆိုတော့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်…
ဟင်းတွေက ချက်တယ်.. အားချင်းဆိုတော့ ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်…
ဆိုင်တွေဆိုစားတယ်… ဆာတာနဲ့ ဓာတ်ပုံ မရိုက်ဖြစ်နဲ့… ဆိုင်တွေကလဲ ပြန်ထပ်လာတယ်… ပို့စ်လဲ နည်းနေတယ် ဟုတ်… ဂဇက်မှာ.. ပြန်ပေးမယ်လေ… muli.htut@gmail.com ကို ပို့လိုက်…
သတင်းတိုတစ်ပုဒ် = တစ်ဒေါ်လာခွဲ
အဲ
.” Look out” ကိုတော့ ရုပ်ရှင်တွေမှာအကြားများလို့မှတ်မိနေတယ်…ရှဲရှဲနီပါ